Guryaha Kirada gudaha Saskatchewan
Guri ama degmo waa goob la dego oo loo isticmaalo deganaansho rasmi ah ama mid joogto ah oo qof, qoys, qoys ama dhowr qoys oo qabiil ah. Had iyo jeer waa guri, abaar, ama dhismo kale, ama beddel ahaan guri guur-guurta, fadhiga guriga, wiishashka ama hoyga kale ee la qaadan karo. Guryuhu caadi ahaan waxay bixiyaan aagag iyo tas-hiilaad hurdo, cunto diyaarin, cunno iyo nadaafad. Kooxahan waaweyni waxay ku noolaan karaan guryaha lagu xannaaneeyo dadka da'da ah, guryaha carruurta, guryaha lagu xannaaneeyo ama xarun kale oo la mid ah. Guri-guri waxaa kale oo ku jira dhul beereed iyo tas-hiilaad loogu talo galay xayawaanka guryaha lagu haysto. Meel aan guryo ammaan ah laga heli karin, dadku waxay ku noolaan karaan guryo aan rasmi ahayn oo mararka qaarkoodna guryo sharci-darro ah laga helo isku-rarannada iyo magaalooyinka ilbaxsan. Guud ahaan, "guri" waxaa loo tixgelin karaa inay tahay juqraafi ahaan, sida magaalo, tuulo, xaafad, magaalo, ama waddan. Hoyga ku-meelgaarka ah ee xarun daaweynta muddo toddobaadyo ah sida caadiga looma tixgeliyo inuu yahay mid joogto ah oo beddelaya goob aad u deggan sidii 'hoy'.